किन चलेन शाहरुख खानको स्टारडम ? – Namaste Filmy
किन चलेन शाहरुख खानको स्टारडम ?
केहि बर्षयता बलिउडमा एकछत्र राज गरेका खान हिरोहरुलाई पछिल्लो समय केहि झड्का लागेको अनुभव गरिएको छ । तीन खान मध्यका बादशाह शाहरुख खानको पछिल्ला दुई फिल्मले लगातार कमजोर ब्यापार गरेपछि बलिउडमा यस्तो बिश्लेषण चलेको छ ।
शाहरुखको हाल प्रदर्शनमा रहेको फिल्म ‘फ्यान’को ब्यापारलाई पनि कमजोर मानिएको छ । यसअघि रिलिज उनको फिल्म ‘दिलवाले’ले पनि सोचेअनुसार कलेक्सन गर्न सकेको थिएन । जसबाट रेगुलर सुपरहिट फिल्म दिइरहेको बादशाह खानको हिट यात्रामा ब्रेक लागेको थियो । ‘दिलवाले’ असफल फिल्म भएको शाहरुख स्वयमले स्वीकारेका थिए । तर उनलाई ‘फ्यान’ पनि असफल हुनेछ भन्ने लागेको थिएन ।
यसपटक पनि उनको स्टारडम चलेन । दर्शकले फ्यानलाई पनि नरुचाएको बलिउड बजारमा चर्चा छ । रिलिजको पाँच दिन बितिसक्दा पनि फिल्मले सय करोड पारको ब्यापार गर्न सकेन । जबकि खानहरुको हरेक फिल्मले २ या ३ दिनमै सय करोड पार गर्ने गथ्र्यो ।
यसबाट शाहरुको स्टारडम नचलेको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ । दर्शकले बिस्तारै खान हिरोहरुलाई इग्नोर गर्न थालेको केहि भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन । तर आमिर र सलमान खानको पछिल्ला फिल्महरु भने अहिलेसम्म असफल भइसकेका छैनन् ।
सुपर हिट फिल्म अग्नि-पथ को सिक्वेल अग्नि-पथ २ निर्माण हुने